Ma ii sheegi kartaa boosaska saxda ah liiska sare ee liiska awoodda?
Waxaa si fiican loo yaqaanaa in si fiican loogu daro Google, website kasta wuxuu u baahan yahay inuu helo maaddo weyn oo qiimo leh, habboon oo ku habboon SEO-ka, iyo dabcan, liiska tayada sare iyo tayada sare. Ka hor intaan wax kale jirin, aan aragno - shabakadaha shabakadaha ee spammy dadweynaha ma ahan kuwo qabow, sidoo kale inta kale ee Black Hat wax kale. Waxaan rabaa inaan galo boggeeda internetka ee horumarka gebi ahaanba khatarta aadka u daran ee lagu ciqaabayo Google.
Sidaa daraadeed, aan aragno qaar ka mid ah khayraadka internetka ee ugu sareeya ee internetka si loola xiriiro. Hase yeeshe, si kastaba ha ahaatee, in hay'addan sare ay dib u eegto liiska bogagga internetka waa in loola dhaqmo ixtiraam. Wax walba waa in si habboon loo sameeyaa - dhammaan waxaad u baahan tahay waxaa jira kaliya waqti ku qaadashada inaad sameyso bogga aadka u weyn mid kasta oo ka mid ah boggaga internetka ka hor inta aadan ugu dambeyn ku darin xiriirkaaga. Halkan waxaa ku qoran dhibcooyin qoraalo si aad u bilawdo:
Bog kasta oo kaliya, buuxi dhammaan xogta lagama maarmaanka ah (i. e. ku dar qoraalka ku haboon, buuxi bioqontaada iyo qaybaha intiisa kale ee asaasigaaga shakhsiyeed, daabacaan sawirada, sawirada, su'aalaha badanaa la isweydiiyo, iyo isku xirnaanta khayraadka kale ee tooska ah ee internetka).
Xusuusnow, yoolkaagu wuxuu samaynayaa nooc kasta oo ah waxyaabo waxtar leh (sida joornaalada, feylka, iwm.), oo ahmiyad gaar ah u leh dhabarkaaga. Sidaa oo kale, waxaad yeelan doontaa xiriir kasta oo aad u habboon intii suurtagal ah si ay u noqoto mid xuduud ah iyo xitaa awood badan.
Youtube - si sahlan u samee kanaalkaaga ku jira fiidyowga caanka ah ee ugu caansan. Looma baahna inaad walwaliso, haddii aadan haysan wax fiidiyo ah oo la heli karo. Dabcan, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto ugu yaraan midkiinna, laakiin weli waad xor u tahay inaad wadaagto fiidiyow kale. Kaliya hubso in wax walba oo aad ku qorto content-kaaga aad geliso kanaalka cusub ee YouTube waa mid ku haboon xiriirkaaga. Sidaa daraadeed, ha ilaawin inaad buuxiso sharaxaadda boggaaga (qiyaastii 300 eray ayaa samayn doona) oo ku dheji qaybaha faallooyinkaaga faallooyinkaaga.
Facebook iyo Twitter - looma baahna in la yiraahdo in qof kastaa uu leeyahay shakhsiyado shakhsi ahaaneed. Laakiin ujeedooyinka dhismaha ee isku xidhka, waa inaad qaabeeysa taageerada gaarka ah ama bogga ganacsiga. Dhamaan waxaad u baahan tahay waxaa kaliya oo isku xiraya boggaaga bogga, oo ku dar waxyaabo ku haboon ama faallooyin ku saabsan - adiga keligaa, ama boggaga kale ee user. Kaliya iska hubso inaad buuxisid wax walba oo aad sameysey dhammaan qaababka lagama maarmaanka ah.
Wikipedia - ayaa ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee lala xiriirinayo. Dabcan, taasi ma noqon lahayd hawl sahlan. Si kastaba ha noqotee, hubso inaad si fiican u shaqeyso dib u soo celinta Wiki-ka - waa u qalmaa dadaal kasta oo adag. Sidee loo sameeyaa? Habka ugu fiican waa in la raadiyo waxyaabo caan ah oo la xidhiidha nikadaada oo raadinaya xiriirro jajaban ama tixraac la soo dhaafay. Sidaa oo kale, waxaad hagaajin kartaa khaladaadkaas iyo inaad isku xirto boggaaga gaarka ah, kaas oo ka dhigaya tixraac sax ah oo ka fiican. Isla mar ahaantaana, waad sii wadi kartaa habka aadka u shaqeyn kartid iyo inaad ka shaqeysid inaad ku darto tixraacyo cusub boostadaada. Hubi, si kastaba ha noqotee, in mawduucaagu yahay mid dhab ah. Haddii kale, isbedelkaaga waa lagaa saari doonaa si dhakhso ah, isla markiiba.
Ugu dambeyntii, halkan waxaa ku yaalla inta kale ee bogagga ugu fiican si aad u noqoto. Waxaan kugula talinaynaa in aad isku daydo ilaha internetka ee soo socda si aad u hesho xiriiryo tayo leh: Google Plus, Pinterest, LinkedIn, SlideShare, Reddit, Vimeo, Flickr, Tumblr, Delicious, Quora, WordPress. Waxaan hubaa inaad ka heli karto laba ka mid ah iyaga oo aad u faa'iido leh si ay ula xiriiraan Source .